प्रमुख समाचार – Page2– Hamropati.com
Home»प्रमुख समाचार (Page 2)
तीन दिनभित्रै पार्टी एकता र सरकारलाई पूर्णता : पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलले अबको तीन दिनभित्रै एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने र सरकारले पनि पूर्णता पाउने ठोकुवा गरेका छन् । आइतबार रिपोर्टस क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले तीन दिनभित्र पार्टी एकता हुने र सरकारले पनि पूर्णता पाउने बताएका हुन् । उनले भने, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ, यो जनताको अपेक्षा […]
व्यापारीको घरमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको ‘वान टु वान’ वार्ता जारी
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भक्तपुरको पुरानो ठिमीस्थित एक व्यापारीको घरमा ‘वान टु वान’ छलफल सुरू भएको छ। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवास वा कार्यालयमा मात्र राजनीतिक भेटवार्ता गर्छन्। तर दुई पार्टीका नेताहरूले एकताको छलफल गर्न व्यापारीको घर रोजेका हुन्। यसअघि दुई नेताले ललितपुरको मानभवनस्थित ठेकेदार शारदाप्रसाद […]
प्रधानमन्त्रीलाई ईञ्जनियरले दिए देश बनाउने खाका
काठमाडौं – नेपाल विकाशको हिसाबले विश्वका धेरै देशहरु भन्दा पछाडि परेको मुलुक हो । देशमा धेरै चोटी सरकार परिवर्तन भए पनि ७० वर्ष देखी स्थायी सरकार नेपािलमा बनेको छैन । यसले नेपाललाई ठुलो चुनौति दिईरहेको छ । नेपालमा पुर्वाधार विकाश राम्रो नभएका कारण पेपाल पछाडि परेको भन्ने सबैको भनाई छ । पञ्चायतकाल, बहुदलीय कालखण्ड तथा […]
यी पाँच भाइ, जो सिलवालको खेदो गरिरहेका छन्
काठमाडौं – देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिले नै यसरी राजनीतिक तथा अन्य व्यक्तिलाई फन्दामा पार्नतर्फ अग्रसर भएपछि जनताले तिनीहरुबाट कस्तो सुरक्षा तथा सेवा पाउने अपेक्षा गर्ने ! यो समस्या एकदमै चासोको विषय बनेको छ । यसैगरी, केही समयअघि पूर्व डिआइजी तथा वर्तमान ललितपुर १ का सभासद नवराज सिलवालको विरुद्धमा कारबाही गराउने अभियान नै चलाए । यस […]
मेडिकल कलेज सरकारले नै चलाउने वामपन्थी सरकारको योजना
काठमाडौं । वाम गठबन्धनको सरकारले सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने योजना अघि सार्ने भएको छ । एमाले र माओवादी सम्मिलित कार्यदलले सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन कामको सन्दर्भमा मेडिकल कलेज सरकारले नै चलाउनुपर्ने सुझाव तयार पारेको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको […]
अदालतबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी– पट्टी बाँध्नुपर्ने आँखामा पावर थपिनुहुन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकबाटै न्यायालयको विरोध हुने कुरालाई सामान्यरुपमा लिन नहुने बताएका छन् । सरकारले मर्यादित न्यायापालिकाको अपेक्षा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पट्टी बाँधिनुपर्ने न्यायाधीशको आँखामा पावर थपिन नहुने टिप्पणी गरे । नेकपा (एमाले) को कानुन विभागले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिका मर्यादित हुनुपर्ने […]
यी हुन् भारतीय नागरिक, नेपाली सांसद
By on February 17, 2018 प्रमुख समाचार
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुरेशचन्द्र दासको नाम भारतीय मतदाता सूचीमा रहेको खुलेको छ । भारतमा मतदाता हुनका लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको भारतीय नागरिक हुन अनिवार्य छ । नागरिक पत्रिकालाई प्राप्त कागजातअनुसार भारत, बिहार राज्यको दरभंगा जिल्लास्थित दरभंगा नगरपालिकाअन्तर्गत दासको नाम छ । उनको […]
मन्त्री बनेको दुईदिनमै लालबाबुले ल्याए गतिलो योजना
काठमाडौं – उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ३१ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । वाग्मती सफाइ महाअभियानको २४९औँ हप्तामा आज पशुपति राममन्दिर अघिको वाग्मती नदी क्षेत्रमा सफाइ गरी नौ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा ३५० भन्दा बढी अभियन्ताको सहभागिता रहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिकी सञ्चालक सदस्य माला खरेलले राससलाई […]
ओलीले गरे सिलवालको बारेमा कानुनी छलफल, अब के होला ?
काठमाडौं -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार केही कानूनविदहरुलाई निवासमा बोलाएर नवराज सिलवालको केसको बारेमा परामर्श गरेका छन् । ओली निकट स्रोतका अनुसार अब सिलवालका बिषयमा गर्न सकिने कानुनी व्यबस्थाका बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ । देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएसँगै सिलवालले अधिनायकवादी पात्रको ज्यादतिबाट मुलुकले उन्मुक्ति पायो भन्दै ट्वीट गरेका थिए । ओली सुरुदेखि नै सिलवालको […]
काठमाडौं – दक्षिणी मेक्सिकोको वहाका राज्यमा ७.२ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। क्षतीको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। भूकम्पले त्यहाँदेखि झण्डै ३ सय किलोमिटर टाढा मेक्सिको सिटीमा रहेका भवनहरू समेत हल्लाएको थियो। भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि मेक्सिको सिटीमा अत्तलिएका हजारौं मानिसहरू सडकमा निस्किएका थिए। टेलिभिजन फूटेजमा मानिसहरू सडकतर्फ निस्किरहेको देखिन्छ। उनीहरू एक अर्कालाई अंकमाल गर्दै […]